Dippilomaasii dinagdee milkaa'aa
Ergamni Ministeera Dhimmaa Alaa Itoophiyaa hariiroo dippilomaasi cimsuudha. Kunis, hariiroo biyyattiin biyyoota alaa waliin qabdu gama hundaan fooyya'uun milkaa'aa akka adeemu gochuudha. Imaammataafi tarsiimoon hariiroo dippilomaasii alaa biyyattis kan bu'uureffatu dippilomaasummaa dinagdeerratti. Kunimmoo biyyattiin dinagdeeshee guddisuudhaaf invastarootaa hawachuun, saayinsiifi teknolojii ceesisuu, hawata turizimii cimsuufi omishaalee baasiitiif gabaa barbaaduudha. Tibba darbes bu'aalee argamaa jiran ilaalchisee Dubbi Himaaan Ministira Dhimma Alaa Itoophiyaa Obbo Mallas Alam ibsa kennanirra hubachuun kan danda'amu.
Akka ibsasaaniitti, Itoophiyaan biyyoota alaa waliin hariiroon qabduu dabalaa dhufeera. Keessattuu, gama hariiroo dippilomaasii dinagdeerratti hundaa'een yoo ilaalamu baatiiwwan ja'an darbanitti hojiileen hojjetaman milkaa'aa turan. Kunis, kallattiin invastimantii alaa hawachuun, invastaroonni biyya alaa biyyattiitti hojiilee invastimantiirratti akka bobba'an taasifameera.
Haaluma kanaan invastaroota olaanoo kaappitaala doolaara mil.500 hanga biliyoona tokko galmeessisan 39 daawwannaa invastimantii duraa biyyattiitti kan geggeessan ta'uu dubbatan. Kanneen keessas kubbaaniyoonni muraasni boqonnaa hojiitti seenuuf haalduree guuttachaa jiru jedhan.
Kubbaaniyoota kanneeniin dameeleen invastimantii xiyyeeffannaa argatan, damee qonna, agroo-piroosasiingii, manufaakchariingii, industirii 'awutomootiivii', ijaarsa bu'uuraalee misoomaa, humnaafi annisaa maddisiisuu, albuuda, hoteelaafi tuuriizimii, akkasumas damee fayyarrattidha. Akkaatuma kanaan karoora invastaroota olaanoo hawachuuf qabames %100 ol ta'uun milkaa'aa akka tureedha kan dubbatan. Kanneen keessaas kubbaaniyoonni alaa 158 eeyyama invastimantii argachuun gara hojiitti seenuun mirkanaa'aa ta'uu himan.
Kanumaan walqabatee, invastaroota kaappitaala olaanaa galmeessisan hawachuun cinatti, inavstaroonni xixiqqaafi giddugaleessaa 537 biyyattii akka daawwataniifi qorannoo bu'a qabeessummaa invastimantii geggeessusaanii dubbatu.
Biyyoonni kunneenis baay'inaan biyyoota Eeshiyaafi Awurooppaa akka ta'an eeranii, kanneen keessaa kubbaniyoonni Chaayinaa sadarkaa jalqabaarratti kan eeramaniidha jedhu.
Imaammati alaa biyyattii hariiroo dippilomaasii dinagdeerratti hundaa'e kun biyyattin carraa invastimantii argachuun dinagdeeshee guddisuurra darbee abbootii qabeenyaafis carraa gaariidha. Kunis, abbootiin qabeenyaa biyya keessaa kanneen biyya alaa waliin baatiiwwan ja'an darbanitti shariikummaan akka hojjetan deggarsi taasifamuudha kan himan. Haaluma kanaan kubbaaniyoota biyya keessaa 41f walitti hidhamiinsi gabaa taasifamuu eeran.
Akka Obbo Mallasitti, kubbaaniyoonni alaa keessumaa dandeettii olaanaa waan qabaniif, carraa hojii bal'aa uumuu kan danda'anidha. Kunimmoo sharafa alaa argamsiisuudhaan dinagdeen biyyattii akka tarkaanfatuuf gumaacha olaanaa kan qabaatudha.
Kana malees, dinagdee biyyattii cimsuuf, hariiroo dippilomaasummaa dinagdeerratti hundaa'e keessatti omisha industiriiwwaniitiif gabaa biyya alaa barbaaduun tokko akka ta'e ibsu. Yeroo ammaa kubbaaniyoonni garagaraa biyyattiitti omishaalee garagaraa omishanii daldalaa alaarratti bobba'aniif gama gabaa barbaaduutiin, omishaalee baasii toonii kuma 32fi 620 kanneen doolaara Ameerikaa miliyoona shaniifi kuma 327fi 132 baasan gabaa argachuusaanii dubbatu. Omishaaleen gabaaf dhiyaatan kunneen ammoo quyyisa, buna, omisha ilillii, gogaafi kal'ee, albuudaafi foon ta'uudha kan ibsan.
Walumaagalatti, Itoophiyaan hariiroo dippilomaasii dinagdeerratti hundaa'een guddina dinagdeesheef kan barbaachisu invastimantii alaarratti hojjechuun bu'aa gaariin argamaa jira. Kunimmoo biyyattiin haalota invastimantiif mijaa'oo ta'an qabaachuurraan kan ka'e, invastaroonni alaa hedduun ijasaanii gara biyyattiitti deebisaa jiru. Kana faanas carraaleen bal'aan kan argaman yoo ta'u, hojii uumuu, sharafa alaa argamsiisuun isaan invastimantii kana faana hordofanii dhufaniidha. Kanaaf, bu'aa argamaa jiruun yoo walbira qabamee ilaalamu imaammati alaa biyyattii dippilomaasii dinagdeerratti hundaa'ee milkaa'adha.
Torban kana/This_Week 10570
Torban darbe/This_Month 96927
Guyyaa mara/All_Days 1435350